Ngwa ngwa! Anyị na-akpali ọhụrụ Plant!
Ezigbo ndị enyi m, ụtụtụ ọma nụ onye ọ bụla! Taa bụ June 8th, 2017, anyị nwere nnukwu nsọpụrụ iguzo ebe a, jide mmemme mmeghe nke Enuo ebu Co., Ltd., wee hụ oge echefu echefu nke ụlọ ọrụ ahụ. Site na ikere òkè nke ndị mmekọ Enuo Mold, ekele maka nkwado ... GỤKWUO
Chaị! ezumike magburu onwe ya na osimiri!
-A ezumike na Dapeng beach Ezigbo ndị mmekọ ebu Enuo: Mgbe ọ bụla oge a gbanwere, a maara na oge gafere. N’amaghị ama, Ọgọọst ga-atụgharị na kalenda 2018. Oge ọkọchị ji nwayọ nwayọ, ma oge mgbụsị akwụkwọ na-abịa. Maka ndị mmekọ niile Enuo, ndị gara aga 8 ... GỤKWUO
-A njem na Nankunshan Hot Spring Health Valley Ọ na-ezo ka ụbọchị na amaghị m na mmiri gafere. Ozugbo ihu igwe dị mma, ana m amata na oge ọkọchị abịawo ogologo oge. Oge na-adị mgbe anyị na-amaghị ihe, kalenda nke 2019 agbanyela na June, na ... GỤKWUO
Taa bụ ụbọchị ọchị!
- Njem nlegharị anya na Songshan Lake nke Eprel kwesịrị ịbụ oge ịhụnanya. Mkpokọta n'ebe piich na-ama ifuru bụ ihe ihere nke ọtụtụ mmadụ n'obi. Agbanyeghị, dị ka onye na-akpụzi ihe, anyị na-enwetakarị nwa oge uri nke obi maka nnyefe nke ọrụ a na ... GỤKWUO